February 1, 2020 - CeleLove
February 1, 2020 CeleLove 0
ဓမ္မတာသွေးအရောင် ဒါမှမဟုတ် အဖြူဆင်းတဲ့ အရောင်ကတစ်ဆင့် သိနိုင်မယ့် သားအိမ်ကျန်းမာရေး အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လစဉ်ဓမ္မတာလာတာနဲ့ ဓမ္မတာမလာမီမှာ အဖြူဆင်းတာတွေက ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဓမ္မတာလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဖြူဆင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရောင်အဆင်းကိုကြည့်ပြီး သားအိမ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သတိထားနိုင်ပါတယ်၊ ဒီတော့မှ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို ကြိုကြိုတင်တင် လုပ်နိုင်ထားနိုင်မှာပါနော် …။ (၁) […]
ဒီနေ့ ညနေ ၅နာရီခန့်က ပုဂံမြို့ဟောင်း စူဠာမဏိဘုရား တောင်ဘက် တရုတ်ကားများဖြင့် မောင်းတက်လာ . . .
ဒီနေ့ ညနေ ၅နာရီခန့်က ပုဂံမြို့ဟောင်း စူဠာမဏိဘုရား တောင်ဘက် တရုတ်ကားများဖြင့် မောင်းတက်လာ . . . ဒီနေ့ – ၁.၂.၂၀၂၀ – ရက် ညနေ ၅နာရီ အချိန်ခန့် ပုဂံမြို့ဟောင်း စူဠာမဏိဘုရား တောင်ဘက် ရှေ့ဟောင်းအုတ်ကုန်းဖြစ်သည့် အိုးခြမ်းပဲ့ ကုန်းတွင် […]
ကပ်ဘေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇွဲကပင်တောင် လက်ရှိအခြေနေ မီးလောင်နေပါကြောင်း….
ကပ်ဘေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇွဲကပင်တောင် လက်ရှိအခြေနေ မီးလောင်နေပါကြောင်း…. ကပ်ဘေးရဲ့ ဒုတိယအဆင့် ငှက်တွေ ကောင်းကင်မှာပျံနေရင်းနဲ့မျက်လုံးတွေလည်ပင်းတွေကနေ သွေးတွေထွက်ပြီး ပြုတ်ကျကုန်တယ် …။ နှံကောင်တွေ အများကြီး ယာခင်းတွေဆီကို ဆင်းလာပြီးဖျက်စီးတယ် ….ငှက်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် လူတွေနဲ့ အနီးဆုံးကို ရောက်လာတယ် …။ အဲဒါတွေက ကပ်ဘေးရဲ့ […]
နေ့ခင်းကြောင်တောင် မိန်းခလေးတစ်ယောက် အတင်းအဓမ္မ အနိုင်ကျင့်မှုဖြစ်(ရုပ်သံ) မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ ယောက်ျား သိပ်ရွံဖို့ကောင်းပါတယ် …။ အကြောင်းအရာတော့ အပြည့်အစုံမသိသေးပါဖူး ။ မိန်းခလေးပြောပြတာတော့ လက်ထပ်ယူပီးသား ဖြစ်ပေမယ့် ကွာရှင်းပီးတာ ၆ လကျော်ရှိပီ …။ ဘယ်လိုပဲပတ်သက်တဲ့အတွဲဖြစ်နေပါစေ ခုလို မတရား လူမဆန်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ မလုပ်သင့်ဘူး။ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး […]
အလှူညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ … အလှူ ညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှာ သွားလိုက်သောအခါ… အလှူမှာ ညတရားပွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း မဏ္ဍပ်ရှေ့ထွက်ထိုင်နေမိချိန်လေး….. ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကျွန်တော့်က ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှပဲ ဆော့နေကြတာမဟုတ်ဘူးဗျ […]
(၁၂) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး တိုက်ရန် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် (1.2.2020) ဒီpostအောက်မှာပဲ editလုပ်ပြီး အားလုံးတင်သွားပါမယ် …။ #သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ဠ ၈၅၇၅၂၀ #သိန်းတစ်သောင်းဆု ဠ ၉၁၁၅၄၆ #သိန်းငါးထောင်ဆု ဠ ၆၁၅၃၃၇ ဏ ၁၂၆၂၁၈ #သိန်းနှစ်ထောင်ဆု […]
ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုကြီး ကံထူးရှင်မိသားစုပေါ်ထွက်လာပါပြီ
ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုကြီး ကံထူးရှင်မိသားစုပေါ်ထွက်လာပါပြီ ကျုံပျော်မြိုမှ သိန်း၁၅၀၀၀ဆုကြီးကံထူးရှင် ၁၂ ကြိမ်မြောက်သိန်း၁၅၀၀၀ဆုကြီးကံထူးရှင်မိသားစုကို‌ဇော်မင်းထွန်း+ ဆရာမဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်းဆင်နှစ်ကောင်ကျေးရွာကျုံပျော်မြို့နယ် Crd : U Soe Than ကျုံပျော်ထီဆိုင် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် (1.2.2020) ဒီpostအောက်မှာပဲeditလုပ်ပြီးအားလုံးတင်သွားမှာပါ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ဠ ၈၅၇၅၂၀ သိန်းတစ်သောင်း ဠ ၉၁၁၅၄၆ […]
(၁၂)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု…
(၁၂)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု… (၁၂)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု ဖြစ်ပါတယ် …. ။ ရုပ်သံကို အောက်တွင်ကြည့် ရှုနိုင်ပါတယ် … ။ #Ah Hsu Unicode (၁၂)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလသေိနျးဆုဖှငျ့ပှဲ တိုကျရိုကျ ထုတျလှငျ့မှု… (၁၂)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလသေိနျးဆုဖှငျ့ပှဲ […]
မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာကို ဖတ်ထားပြီး လိုက်နာကြပါ…
မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာကို ဖတ်ထားပြီး လိုက်နာကြပါ… အိန္ဒိယသမ္မတ ပြောသွားတဲ့ “မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား” တဲ့ ပေးနိုင်ရင် ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ …။ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် လည်းတိုက်ဆိုင်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတို့အချိန်ယူပြီး ဖတ်စေချင်တယ်။ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ …။ […]